Common Problems | myanmarexcelexpert
၁. Excel သုံးရတာ အရမ်းလေးနေပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်ပါသလဲ?
Excel လေးရခြင်းအကြောင်းအရင်းများစွာရှိပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ ဖြစ်တန်ချေအများဆုံး ဖြေရှင်းနည်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်ထဲမှာ Calculation တွေ၊ Formula တွေ အရမ်းများနေလားကြည့်ပါ။ အရမ်းများနေရင် ကိန်းဂဏန်း တစ်ခုရိုက်လိုက်တိုင်း Auto update လုပ်နေတာကြောင့် စက်က လေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Excel Options ကိုသွားပါ။ အဲဒီမှာ Formula ကိုကလစ်လိုက်ပါ။ ညာဘက်အကွက်ထဲက For Workbook Calculation ကို Manual အဖြစ်ပြောင်းပါ။ ဒါဆိုရင် ဂဏန်းရိုက်လိုက်တိုင်း Calculation ကို Update လုပ်တဲ့အချိန် စောင့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ အကုန် ရိုက်ပြီးမှ F9 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ထည့်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကို Update လုပ်ပေးပါသွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ Excel Sheet ထဲမှာ Format ထည့်တာတွေ အရမ်းများနေရင်လဲ သုံးရတာ အရမ်းလေးတတ်ပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ Format တွေကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ Format တွေ ရှိတဲ့ Cell တွေကို Select မှတ်၊ Home tab အောက်မှာရှိတဲ့ Clear Format ကိုအသုံးပြု တာက မြန်ဆန်စေပါတယ်။
Excel Add-in တွေ ကြောင့်လဲ စက်ကလေးတတ်ပါတယ်။ အသုံးမလိုဘူးဆိုရင် Add-in ကို မသုံးပါနဲ့၊ Excel Option > Add-in ကိုသွား၊ Add-in window ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ Manage Add-ins ဆိုတာရှိတယ်၊ အဲဒီက Go ကို ကလစ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်မလိုအပ်တာကို Uncheck လုပ်ရုံပါပဲ။
အပေါ်က အဖြေတွေနဲ့မရဘူး၊ လေးနေတုန်းပဲ ဆိုရင် တော့ အောက်က အတိုင်း အဆင့်ဆင့်သွားပြီး Diagnostics နဲ့ စစ် ပြီး အဖြေရှာ ကြည့်ပါ။ Micorosoft သွင်းတုန်းက Microsoft Office Tools ကို သွင်းခဲ့ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Tools > Microsoft Office Diagnostics..
၂။ Excel Sheet ကို Edit လုပ်လို့မရတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
Excel Sheet ကို Protect လုပ်ထားမိလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Reveiw Tab ရဲ့အောက်မှာ Unprotect Sheet ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။
နောက်ထပ် ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုက Read Only ဖြစ်နေလို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မူရင်း Excel file ကို သွား Right Click ထောက်ပြီး Properties ကိုသွားပါ။ General အောက်က Attribute ရဲ့ Read Only မှာ အမှန်ခြစ်ရှိနေရင် ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါ။
၃။ Formula ရေးပြီး Enter ခေါက်ပေမယ့် အဖြေမရပဲ ဘာကြောင့် Formual ပဲ ပြနေတာပါလဲ?
Formulas tab အောက်က Show Formula ကို ကလစ်ထားမိလို့ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ် Show Formula ကို ထပ် ကလစ်ပြီး
Select လုပ်ထားတာကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
၄။ Cell အတွင်းမှာစာမပေါ်ပဲ ဘာကြောင့် ######## လို့ ပေါ်နေတာပါလဲ ?
Cell Column width က ကျဉ်းပြီး စာက များနေလို့ပါ။ Column width ကို ချဲ့ပေးလိုက်ပါ။
၅။ Scroll ဆွဲလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်၊ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
Sheet ရဲ့  အောက်ပိုင်း တစ်နေရာရာမှာ Freeze panes လုပ်ထားမိလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Unfreeze ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ။
၆။ Cell တွေကို Merge လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ Merge and Centre ကလဲ Grey ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
Sheet ကို Portect လုပ်ထားမိလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Review အောက်မှာ Unprotect sheet ပြန်လုပ် ကြည့်ပါ။
၇။ Filter and Sort လုပ်လို့မရတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
Sheet တွေအများကြီးကို Select ပေးထားတာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို နှစ်ခု (သို့မဟုတ်) နှစ်ခုထက် ပို တဲ့ Sheet တွေကို Group ဖွဲ့ထားလို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Sheet တစ်ခုခုအပေါ်မှာ Right Click ထောက် ပြီး Ungroup ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။
၈။ Freeze panes အသုံးပြုလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
Page Layout View မှာဖြစ်နေလို့ပါ။ Normal View ကို ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါ။ View tab ရဲ့ အောက် မှာရှိပါတယ်။
၉။ Conditional formatting ကို အသုံးပြုလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
​Sheet ကို Protect လုပ်ထားလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Review ရဲ့အောက်မှာ Unprotect Sheet ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။
Workbook ကို Share လုပ်ထားမိလို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Review ရဲ့အောက်မှာ Share workbook ကိုသွားလိုက်ပါ။ Allow မှာ အမှန်ခြစ် ဖြစ်နေရင် ဖြုတ်လိုက်ပါ။
၁၀။ Circular Reference Warning Box ကျ ကျလာပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ၊ ဘယ်လို ဖြေရှင်းသင့်ပါသလဲ?
Circular Reference Warning Box ကျလာပြီဆိုရင် ကိုယ် အသုံးပြုတဲ့ Formula ထဲမှာ အမှား ပါ ကောင်း ပါနိုင် တယ်ဆို ပြီး ပြောတာပါ။ ကိုယ် အသုံးပြုတဲ့ Formula တွေကို ပြန်စစ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တွက်ချက် ချင် တာမှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Error box ပေါ်နေတုန်းဆို ရင်တော့ Excel Option ကနေ Formula ကိုသွားပါ၊ Enable iteration ကို အမှန်ခြစ်ပါ။ သူရဲ့အောက်က Maximum Iterations ကို 100 ထားပြီး Maximum Change ကို 0.001 ထားပြီး OK ပေးပါ။
Warning Box ပေါ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။